Accueil > Gazetin'ny nosy > Vehivavy mpandraharaha : Nisedra olana nohon’ny krizy nifanesy
Manao fivoriana eto Antananarivo ny vehivavy mpandraharaha malagasy ao amin’ny GFEM manerana an’i Madagasikara omaly talata sy androany alarobia faha 18 may 2022, izay atao ao amin’ny Carlton Anosy. Miisa 250 mahery izy ireo. Midinika ny fomba ho entina hiatrehana ny fanatsarana ny fandraharahana eto Mada-
gasikara aorian’ny krizy vokatrin’ny covid-19 tao anatin’ny roa taona izay.
Nanambara ireto mpandraharaha vehivavy GFEM ireto fa mafy ny fitantanana ny orinasa vokatr’iny raharaha iny. Misy mihitsy no tady ho maty ny orinasa. Tsy maintsy mitraka nefa satria mbola hiatrika ny krizy vokatrin’ny ady any Ukraine indray natiana natsy tiana. Hifanakalo hevitra sy hifampita traikefa ary hiaraka hitady vaha olana miaraka amin’ny fanjakana no anton’ny fivoriana mba tsy hahapotika ny vehivavy mpandraharaha ireto.
Toa ny orinasa rehetra maneran-tany dia misedra olana avokoa ny fandraharahana.Tsy maintsy miatrika izany ny GFM hoy ny mpikambana iray avy any Toliara ny Princesse IDY Alinah Raïssa izay PDG ny orinasa ARED OR . Vonona tanteraka hanao fanamby amin’ny fanatsarana ny fandraharaha ny vehivavy ireto na dia ao anatin’ny krizy izao aza.